ဘာစီလိုနာ တို့ ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရသလဲ . . . ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြောပြသွားတဲ့ နည်းပြ ဗယ်ဗာဒီ - SPORTS MYANMAR
ဘာစီလိုနာ တို့ ဘာကြောင့် ရှုံးနိမ့် ခဲ့ရသလဲ . . . ဘယ်သူ့မှာ တာဝန်ရှိသလဲ ဆိုတာ ပြောပြသွားတဲ့ နည်းပြ ဗယ်ဗာဒီ
ဘာစီလိုနာ အသင်း ဟာ ယမန်နေ့ ညက လာလီဂါ ပွဲစဉ် အဖြစ် ဂရန် နာဒါ အသင်း ရဲ့ အိမ်ကွင်း ကို သွားရောက် ယှဉ်ပြိုင် ကစား ခဲ့ပြီး ၂ – ၀ နဲ့ အရေးနိမ့် ခဲ့ရ ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဒီရာသီ အဖွင့် ၅ ပွဲ ကစား အပြီး မှာ ဘာစီလိုနာ အတွက် ဒုတိယ မြောက် အရေးနိမ့် ခဲ့ရမှု ဖြစ်ပြီး နည်းပြ ဗယ်ဗာဒီ အတွက် တော့ ဖိအား တွေ အလွန် များပြား ခဲ့ရပြီ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ မက်ဆီ ကို အရန် ခုံ မှာ ထားခဲ့ ပြီး ဂရစ်ဇ်မန်း ၊ ဆွာရက် တို့ နဲ့ ပွဲထွက် လာခဲ့ ပါတယ် ။ အိမ်ရှင် ဂရန်နာဒါ ဟာ ပွဲအစ ၂ မိနစ် မှာ တင် အဖွင့်ဂိုး ရရှိ ခဲ့ပြီး ဘာစီလိုနာ ကို ပထမ ပိုင်း တစ်ပိုင်း လုံး ဦးဆောင် ထားနိုင်ခဲ့ ပါတယ် ။
မက်ဆီ ကို လူစား ထည့်သွင်း ကစားခဲ့ ပေမယ့် ဂရန်နာဒါ က ပင်နယ်တီ ကနေ ဒုတိယ ဂိုး ထပ်မံ သွင်းယူ သွားခဲ့ တာ ကြောင့် ပွဲ အပြီး မှာ ဘာကာ တုိ့ အရှုံး ရလဒ် ကို ရင်ဆိုင် ခဲ့ရတာပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။ ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အတွက် ၂၅ နှစ် အတွင်း အဖွင့် ပွဲ ရလဒ် အညံ့ ဆုံး အဖြစ် မှတ်တမ်း ၀င်သွားခဲ့ ပြီး ၅ ပွဲ ကစား ရာ မှာ ၇ မှတ်သာ ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အသင်း နည်းပြ အာနက်စ်တို ဗယ်ဗာဒီ ကတော့ ဂရန်နာဒါ ရဲ့ အဖွင့်ဂိုး အစော ရရှိမှု ဟာ ပွဲ ကို ပိုမို ခက်ခဲ သွားစေ ခဲ့တယ် လုိ့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပြီး ရှုံးပွဲ အတွက် သူ့ မှာ အဓိက တာဝန် ရှိကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
“အဖွင့်ဂိုး အစောကြိး ပေးလိုက် ရတာက ပွဲကို ပိုပြီး ခက်ခဲ သွားစေခဲ့ ပါတယ် ။ ဒါပေမယ့် အဓိက ကတော့ ကျွန်တော်တုိ့ အဝေးကွင်း မှာ ကောင်းကောင်း မကစားနိုင် ခဲ့ကြ တာပါ ။ ဒီနှစ် ထဲ မှာ အဝေးကွင်း ရလဒ် တွေ မကောင်းခဲ့ ပါဘူး”
“အဝေးကွင်း ရလဒ် တွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ကျွန်တော် စိုးရိမ် ပူပန် မိပါတယ် ။ ဒီလို သာ ဆက်ပြီး ဖြစ်နေမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တု့ အတွက် မကောင်း ပါဘူး ။ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပြီးရင် နောက်ထပ် အဝေးကွင်း ပွဲက လာဦးမှာပါ ။ အဝေးကွင်း မှာ ရလဒ် မကောင်းတာ တွေကို ကျော်လွှား နိုင်ဖို့ လိုအပ် နေပါပြီ”
“တာဝန်ယူမှု အပိုင်း အကြောင်း ပြောရရင် တော့ အသင်း ရဲ့ ရှုံးပွဲ မှာ ကျွန်တော် က တာဝန် အရှိဆုံး ပုဂ္ဂိုလ် ပါပဲ ။ ကွင်းထဲ မှာ ကစား သမားတွေ က အဓိက ကျပေမယ့် အားလုံး ခြုံပြီး ပြောမယ် ဆိုရင်တော့ နည်းပြ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော် က တာဝန် အရှိဆုံးပါ”
“တစ်ခါ တစ်လေ ကိုယ်က နိုင်သင့်လျက် နဲ့ မနိုင် တဲ့ ပွဲတွေ ရှိခဲ့ ဖူးပါတယ် ။ ဒီနေ့ ပွဲ ကတော့ ဒီလိုမျိုး မဟုတ် ပါဘူး ။ ဂရန်နာဒါ ရဲ့ ကစားပုံ အတွက် သူတို့ကို ချီးကျုး အသိအမှတ် ပြုပါတယ် ။ သူတုိ့ ဟာ တွန်းတွန်း တိုက်တိုက် ကစားခဲ့ ပြီး ကျွန်တော်တို့ ကို ပွဲအစ ကတည်းက ထိုးနှက် နိုင် ခဲ့ ပါတယ် ။ ကျွန်တော်တို့ ကစားပုံ မကောင်း ခဲ့တာ သူတို့ ရဲ့ ကစားပုံကြောင့်လည်း ပါခဲ့ ပါတယ်” လို့ ဗယ်ဗာဒီ က ပြောဆိုသွား ခဲ့ ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ အတွက် သက်သာ စေခဲ့တာ ကတော့ ဖလား ရယူဖို့ အတူ ရေပန်းစား နေတဲ့ အသက်လက်တီကို မက်ဒရစ် ဟာလည်း ယမန်နေ့ ညက သရေ ကျခဲ့တာ ကြောင့် ရမှတ် ကွာဟမှု များပြားခြင်း မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ လက်ရှိ မှာတော့ ဂရန်နာဒါ ဟာ အဆင့် ၁ နေရာ ကို ၀င်ယူ ထားပြီး ယနေ့ည ကစားမယ့် ဆီဗီးလား – ရီးရဲ မက်ဒရစ် ပွဲ အပြီး ပါက အမှတ်ပေး ဇယား အပြောင်း အလဲ ဖြစ်ပေါ် ဦးမှာ ပဲ ဖြစ် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ တို့ ဘာကွောငျ့ ရှုံးနိမျ့ ခဲ့ရသလဲ . . . ဘယျသူ့မှာ တာဝနျရှိသလဲ ဆိုတာ ပွောပွသှားတဲ့ နညျးပွ ဗယျဗာဒီ
ဘာစီလိုနာ အသငျး ဟာ ယမနျနေ့ ညက လာလီဂါ ပှဲစဉျ အဖွဈ ဂရနျ နာဒါ အသငျး ရဲ့ အိမျကှငျး ကို သှားရောကျ ယှဉျပွိုငျ ကစား ခဲ့ပွီး ၂ – ၀ နဲ့ အရေးနိမျ့ ခဲ့ရ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ဒီရာသီ အဖှငျ့ ၅ ပှဲ ကစား အပွီး မှာ ဘာစီလိုနာ အတှကျ ဒုတိယ မွောကျ အရေးနိမျ့ ခဲ့ရမှု ဖွဈပွီး နညျးပွ ဗယျဗာဒီ အတှကျ တော့ ဖိအား တှေ အလှနျ မြားပွား ခဲ့ရပွီ ဖွဈ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ ဟာ မကျဆီ ကို အရနျ ခုံ မှာ ထားခဲ့ ပွီး ဂရဈဇျမနျး ၊ ဆှာရကျ တို့ နဲ့ ပှဲထှကျ လာခဲ့ ပါတယျ ။ အိမျရှငျ ဂရနျနာဒါ ဟာ ပှဲအစ ၂ မိနဈ မှာ တငျ အဖှငျ့ဂိုး ရရှိ ခဲ့ပွီး ဘာစီလိုနာ ကို ပထမ ပိုငျး တဈပိုငျး လုံး ဦးဆောငျ ထားနိုငျခဲ့ ပါတယျ ။
မကျဆီ ကို လူစား ထညျ့သှငျး ကစားခဲ့ ပမေယျ့ ဂရနျနာဒါ က ပငျနယျတီ ကနေ ဒုတိယ ဂိုး ထပျမံ သှငျးယူ သှားခဲ့ တာ ကွောငျ့ ပှဲ အပွီး မှာ ဘာကာ တို့ အရှုံး ရလဒျ ကို ရငျဆိုငျ ခဲ့ရတာပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။ ဒါဟာ ဘာစီလိုနာ အတှကျ ၂၅ နှဈ အတှငျး အဖှငျ့ ပှဲ ရလဒျ အညံ့ ဆုံး အဖွဈ မှတျတမျး ၀ငျသှားခဲ့ ပွီး ၅ ပှဲ ကစား ရာ မှာ ရ မှတျသာ ရရှိ ထားခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အသငျး နညျးပွ အာနကျဈတို ဗယျဗာဒီ ကတော့ ဂရနျနာဒါ ရဲ့ အဖှငျ့ဂိုး အစော ရရှိမှု ဟာ ပှဲ ကို ပိုမို ခကျခဲ သှားစေ ခဲ့တယျ လို့ ထုတျဖျော ပွောဆို သှားခဲ့ ပွီး ရှုံးပှဲ အတှကျ သူ့ မှာ အဓိက တာဝနျ ရှိကွောငျး ပွောဆို သှားခဲ့ ပါတယျ ။
“အဖှငျ့ဂိုး အစောကွိး ပေးလိုကျ ရတာက ပှဲကို ပိုပွီး ခကျခဲ သှားစခေဲ့ ပါတယျ ။ ဒါပမေယျ့ အဓိက ကတော့ ကြှနျတျောတို့ အဝေးကှငျး မှာ ကောငျးကောငျး မကစားနိုငျ ခဲ့ကွ တာပါ ။ ဒီနှဈ ထဲ မှာ အဝေးကှငျး ရလဒျ တှေ မကောငျးခဲ့ ပါဘူး”
“အဝေးကှငျး ရလဒျ တှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ကြှနျတျော စိုးရိမျ ပူပနျ မိပါတယျ ။ ဒီလို သာ ဆကျပွီး ဖွဈနမေယျ ဆိုရငျ ကြှနျတျောတု့ အတှကျ မကောငျး ပါဘူး ။ ဗီလာရီးရဲ နဲ့ ပွီးရငျ နောကျထပျ အဝေးကှငျး ပှဲက လာဦးမှာပါ ။ အဝေးကှငျး မှာ ရလဒျ မကောငျးတာ တှကေို ကြျောလှား နိုငျဖို့ လိုအပျ နပေါပွီ”
“တာဝနျယူမှု အပိုငျး အကွောငျး ပွောရရငျ တော့ အသငျး ရဲ့ ရှုံးပှဲ မှာ ကြှနျတျော က တာဝနျ အရှိဆုံး ပုဂ်ဂိုလျ ပါပဲ ။ ကှငျးထဲ မှာ ကစား သမားတှေ က အဓိက ကပြမေယျ့ အားလုံး ခွုံပွီး ပွောမယျ ဆိုရငျတော့ နညျးပွ ဖွဈတဲ့ ကြှနျတျော က တာဝနျ အရှိဆုံးပါ”
“တဈခါ တဈလေ ကိုယျက နိုငျသငျ့လကျြ နဲ့ မနိုငျ တဲ့ ပှဲတှေ ရှိခဲ့ ဖူးပါတယျ ။ ဒီနေ့ ပှဲ ကတော့ ဒီလိုမြိုး မဟုတျ ပါဘူး ။ ဂရနျနာဒါ ရဲ့ ကစားပုံ အတှကျ သူတို့ကို ခြီးကြုး အသိအမှတျ ပွုပါတယျ ။ သူတို့ ဟာ တှနျးတှနျး တိုကျတိုကျ ကစားခဲ့ ပွီး ကြှနျတျောတို့ ကို ပှဲအစ ကတညျးက ထိုးနှကျ နိုငျ ခဲ့ ပါတယျ ။ ကြှနျတျောတို့ ကစားပုံ မကောငျး ခဲ့တာ သူတို့ ရဲ့ ကစားပုံကွောငျ့လညျး ပါခဲ့ ပါတယျ” လို့ ဗယျဗာဒီ က ပွောဆိုသှား ခဲ့ ပါတယျ ။
ဘာစီလိုနာ အတှကျ သကျသာ စခေဲ့တာ ကတော့ ဖလား ရယူဖို့ အတူ ရပေနျးစား နတေဲ့ အသကျလကျတီကို မကျဒရဈ ဟာလညျး ယမနျနေ့ ညက သရေ ကခြဲ့တာ ကွောငျ့ ရမှတျ ကှာဟမှု မြားပွားခွငျး မရှိ ခဲ့ ပါဘူး ။ လကျရှိ မှာတော့ ဂရနျနာဒါ ဟာ အဆငျ့ ၁ နရော ကို ၀ငျယူ ထားပွီး ယနညေ့ ကစားမယျ့ ဆီဗီးလား – ရီးရဲ မကျဒရဈ ပှဲ အပွီး ပါက အမှတျပေး ဇယား အပွောငျး အလဲ ဖွဈပျေါ ဦးမှာ ပဲ ဖွဈ ပါတယျ ။